Wednesday June 22, 2022 - 11:28:06
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in boqolaal qof ay dhinteen kadib markii dhul gariir aad uxooggan uu ku dhuftay qaar kamid ah gobollada wadankaasi.
War rasmi ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga ah ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 255 qof ay dhinteen halka 250 kale ay dhaawacmeen kadib markii uu dhul gariir ku dhuftay gobollada Khost iyo Baktiika.
Max'med Nasiim Xaqaani oo ah madaxa hay'adda musiibooyinka ayaa warbaahinta u sheegay in dadka ugu badan ay ku dhinteen gobolka Baktiika islamarkaana ay jiraan dad badan oo burburka hoostiisa ku xaniban.
Dad ku sugan gobolka Bishaawar ee dalka Pakistan ee daris la ah Afghanistan ayaa sheegay in ay dareemeen dhul gariirka.
Wasaaradda gargaarka dowladda Islaamiga Afghanistan ayaa amar kusiisay shaqaalaheeda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay gargaar ula ytiigsadaan dhibanayaasha ayna soo badbaadiyaan dadka burburka hoostiisa ku xaniban
Askar Masaari ah oo ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga Maali.
Weeraro khasaara dhaliyay oo ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.
Shil khasaara dhaliyay oo ka dhacay magaalada Burco.